त्रिभुवन विमानस्थलका स्वास्थ्यकर्मी डराइडराइ नाप्छन्... :: विवेक राई :: Setopati
त्रिभुवन विमानस्थलका स्वास्थ्यकर्मी डराइडराइ नाप्छन् यात्रुको ज्वरो दुई हप्ता नपुग्दै बिग्रियो ज्वरो नाप्न जोडेको स्क्यानर
विवेक राई काठमाडौं, फागुन २१
कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई लिएर नेपाल आउने हरेक यात्रुको अहिले ज्वरो जाँच गरिन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'हेल्थ डेस्क' खडा गरिएको छ।
तर आवश्यक सामाग्री अभावका कारण हेल्थ डेस्कमै खटिने स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन्। पर्याप्त मास्क, पञ्जा, स्यानिटाइजर नहुँदा जोखिममा रहेर काम गर्नुपरेको एक स्वास्थ्यकर्मीले सेतोपाटीलाई बताए।
'कहिलेकाहीँ मास्क र पञ्जाबिनै काम गर्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति कोरोनासँग मिल्ने लक्षण भएको भेटिन्छ। त्यस्तो बेलामा आफूलाई पनि सर्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ,' ती स्वास्थ्यकर्मीले भने।
उनका अनुसार सुरक्षाका लागि लगाउने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विभमेन्ट (पिपिई) को पनि अभाव छ। कामको बेला लगाउने गाउन (पुरै शरीर ढाक्ने) कपडा पनि पनि १० वटामात्र रहेको उनले बताए। त्यो गाउन पनि एम्बुलेन्सका चालकलाई लगाउन दिनु परेको उनको गुनासो छ।
'कोरोनासँग मिल्ने लक्षण कसैमा देखियो अस्पताल पठाउनुपर्छ। एम्बुलेन्स चालकसँग गाउन हुँदैन। हाम्रै दिएर पठाउँछौं। हामीले लगाउन पाएका छैनौं,' उनले सुनाए।
सुरक्षाका लागि चाहिने सामाग्री पर्याप्त नभएकाले ढुक्कसँग काम गर्न नसकिएको उनीहरूको दु:खेसो छ।
टेकुस्थित रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने हेल्थ डेस्कमा खटिने स्वास्थकर्मीलाई सुरक्षा सामाग्री अभाव नभएको दाबी गरे। यसबारे प्रश्न गर्दा पाण्डे झर्किए।
'हामीलाई थाहा छ कहाँ के अभाव छ भनेर। तपाईंहरूले चिन्ता गर्नुपर्दैन,' उनले भने।
स्वास्थ्यकर्मीले समस्या सुनाएपछि यथार्थ बुझ्न तपाईंलाई सोध्न मात्र खोजेको हो भन्ने थप प्रश्नमा उनले भने, 'कुन स्वास्थ्यकर्मीले भनेको हो उसलाई इन्जार्चलाई भनेर पठाउँनु हामी चाहिएको सामाग्री दिएर पठाउँछौं।'
उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामाग्रीको अभाव हुन नदिने दाबी गरे।
अर्का स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्दा उनले पनि सुरक्षाको लागि चाहिने सामाग्री अभाव भएको सुनाइन्। चीनलगायत विकसित देशहरूमा हेल्थ डेस्कमा काम गर्नेलाई पर्याप्त सुरक्षा सामाग्री उपलब्ध हुने बताउँदै नेपालमा आफूहरू जोखिम मोलेर काम गर्न परेको ती स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
'मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा, एप्रोन सबै अभाव नै छ। ठ्याक्कै चाहिएको बेला प्रयोग गर्न पाइएको छैन,' उनले भनिन्।
सुरक्षा सामाग्रीबिनै काम गर्नुपर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू आफूलाई पनि कोरोनाको जोखिम रहने बताउँछन्।
'सबै यात्रुहरूलाई एकएक गरेर जाँच गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मास्क र पञ्जा नै हुँदैन। त्यस्तोबेला शंकास्पद व्यक्ति छ भने हामीलाई पनि सर्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ,' अर्का स्वास्थ्यकर्मीले भने।
स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण आफूलाई धेरै कुरा थाहा भए पनि घरपरिवारको जेष्ठ सदस्यलाई सर्छ कि भन्ने डर रहने उनले सुनाए।
अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूले मास्क, पञ्जा लगायक सुरक्षाका लागि चाहिने सामाग्री पर्याप्त उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई माग गरेका छन्।
विमानस्थलमा थर्मल स्क्यानरले काम नगर्दा समस्या झन् बल्झिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ।
'पहिले स्क्यानर हुँदा यात्रुलाई पनि झन्झट थिएन। हामीले पनि सहजै जाँच गरिन्थ्यो,' उनले भने।
सरकारले यात्रुहरूको ज्वरो जाँच गर्न भने दुईटा स्क्यानर मेसिन जडान गरेको थियो। तर सञ्चालन भएको दुईसाता नबित्दै एउटा स्क्यानर बिग्रियो भने अर्कोले पनि राम्ररी काम गरेको छैन।
'अहिले सञ्चालनमा रहेको स्क्यानरको देखाउने डाटा विश्वासनीय हुँदैन,' एक स्वास्थ्यकर्मीले भने।
थर्मल स्क्यानरले काम गर्न छोडेपछि अहिले इन्फ्रारेड थर्मोमिटरबाट यात्रुहरूको ज्वरो जाँच गरिन्छ।
सबैलाई लाइन लगाएर थर्मोमिटरले जाँच गर्नुपर्दा यात्रुलाई केही ढिला हुने गरेको हेल्थ डेस्कका संयोजक डा. गोपाल पाण्डेले जानकारी दिए।
कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई लिएर अहिले नेपाल आउने जुनसुकै देशका यात्रुहरूको पनि ज्वरो जाँच गरिन्छ।
त्यसको लागि हेल्थ डेस्कमा अहिले २१ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २१, २०७६, ०७:०३:००
यस्तो छ लकडाउन टु लुजडाउनमा जाने सिसिएमसीको प्रस्ताव